Read more about Ophcrack - Free, Open Source Windows Password Cracker Software
Read more about မြန်မာကျူတိုရီယယ် မှ အင်တာဗျူး
ပို့ချ သင်ယူရမည့် သမိုင်းသစ်
Submitted by everlearner on Sat, 07/14/2012 - 16:58
မြန်မာပြည်ကို တစ်ကယ်ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းအမှန်ကို သေသေချာချာ တစ်ကယ်သိဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါမှ သူဟာ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုစိတ် ရှိပါလိမ့်မယ်။ အနာဂါတ်မှာ အမှန်တရားကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့၊ ရိုးသားတဲ့၊ မတရားမှုကို ကိုယ်တိုင်လည်း မလုပ်သလို သူများက လုပ်လာရင်လည်း ငုံ့မခံတတ်တဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ များများ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းပြီး ကြိုးစားမှ ရပါလိမ့်မယ်...
Read more about ပို့ချ သင်ယူရမည့် သမိုင်းသစ်
What Can We Bring Back for Our Country, Myanmar
Submitted by everlearner on Sat, 05/19/2012 - 14:00
We can't see the future ofaperson, is it?
Here is an example of CEO & President of HTC, Mr. Peter Chou (Burmese name U Win Thant) who was born in 1953, in Mandalay, lived till 1981, before he went to Taiwan. More info about his bio at - http://goo.gl/DWqGm
Today he was presenting about his experiences ataSeminar in Yangon, Myanmar Info Tech. I believe the attendees and young people can get some worthy experience and advices from him.
Read more about What Can We Bring Back for Our Country, Myanmar
Read more about လူတော်ချစ်တဲ့ လူတော်တွေ - Clever Guys Love Clever Guys
Mosh ဆိုတာ မကြာသေးမီကမှ မက်ဆာချုးဆက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် MIT က အင်ဂျင်နီယာ Keith Winstein နဲ့ Anders Kaseorg, Quentin Smith, Richard Tibbetts, Keegan McAllister တို့ အတူတူ ရေးသား တီထွင်ခဲ့တဲ့ Remote Terminal application တစ်ခုပါ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးဟာ Roaming ပြုလုပ်တာကို အထောက်အပံ့ပေးပြီး၊ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်နေတဲ့ ဆက်သွယ်မှု (intermittent connectivity) တွေမှာလည်း ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လို အင်တာနက် နှေးတဲ့နေရာမှာ၊ Mobile ဖုန်းလိုင်းက အင်တာနက်ကို ပြန်ပြီး Share လုပ် သုံးနေရတဲ့ နေရာတွေအတွက် Mosh ဟာ အလွန် အသုံးတည့်လာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။
Read more about Mosh - Mobile Shell - Alternative to SSH from MIT
လူတိုင်းဟာ စီးပွားရေးနဲ့ မကင်းပါဘူး။ အသက်ရှင်သန် ရပ်တည်ဖို့အတွက် ဝင်ငွေရရာ အလုပ်တစ်ခုခုကို မဖြစ်မနေ လုပ်ကြရတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဘယ်လောက်အထိ အကျိုးဖြစ်တယ် မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သင့်မှာ အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ လတ်တလော အခြေအနေမှာ ဆင်းရဲသားတွေ အများကြီးရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ရသလောက်ယူမယ် ဆိုတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေပဲ လာပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ဆင်းရဲမွဲတေဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ သင်ဟာ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုခုကို စတင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် Social Entrepreneur တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်ချက် နှစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။
Read more about Myanmar Seriously Need Social Entrepreneurs to Rebuild the Nation
အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား - Are We Ready?
Submitted by everlearner on Sun, 03/25/2012 - 15:14
အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ ပြောင်းလဲ တိုးတက်စပြုနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို အားရဝမ်းသာ စောင့်ကြည့်နေရင်း နေ့တိုင်းနီးပါး စဉ်းစားမိနေတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ "ငါတို့ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေ ဝင်လာတဲ့အခါ၊ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီး အဂတိလိုက်စားမှုကင်းတဲ့ စီးပွားရေး စနစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ။
ဒေသခံ မြန်မာလူငယ်တွေက အလယ်အလတ်နဲ့ အဆင့်မြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေရဖို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီး ရင်ဆိုင်ရစရာ ရှိပါတယ်။ မိုးရွာပေမယ့် ခံစရာ ခွက်မရှိလို့ မိုးကောင်းတုန်း ရေမခံရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သား လူငယ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လူငယ်တွေကို အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ အလုပ်တွေမှာပဲ သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်လုပ်ကိုင် နေတာပဲ မြင်တွေ့ချင်တာ အမှန်ပါ။
Read more about အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား - Are We Ready?